Shilal khasaare badan geystay oo ka dhacay wadada Muqdisho & Afgooye * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Shilal gaari oo manta ka dhacay wadada Afgooye iyo magaalada Muqdisho ayaa sabababy dhimasho farabadan.
Shilka hore oo ahaa mid aad u xun ayaa ka dhacay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, gaar ahaan deegaanka Garasbaalley, waxaana shilkaas ku dhintay ugu yaraan 7 ruux, iyadoo tirade intaas ka badan karto.
Gaari xamuul ayaa ku dul rogmayday gaari kale oo dad la socdeen, waxaana khasaare dhimasho iyo dhaawac ah soo gaaray dadkii la socday labada gaari.
Dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmay ayaa loo qaaday isbitaallada Muqdisho, gaar ahaan Isbitaalka Madiina.
Dhanka kale waxaa maanta gaari soo fariin goostay uu jiiray goobta timaha lagu jaro oo ku taalla ilinka hore ee wadada aada taliska booliska Soomaaliya oo ku dhow madaxtoyada, waxaana halkaasi ku dhintay hal qof oo goobta ka agdhawaa.
Darawalkii weday gaariga shilka geystay ayaa boolisku gacanta ku dhigeen, waxaana meel aan ka fogeyn halkaas todobaadkii shil ku galay gaari xamuul ah oo qalab ka qaaday dekedda Muqdisho.